Sida loo helo macluumaad lagu kalsoon yahay oo looga fogaado qiyaanooyinka | How to find trustworthy information and avoid scams | Unite against COVID-19
Sida loo helo macluumaad lagu kalsoon yahay oo looga fogaado qiyaanooyinka | How to find trustworthy information and avoid scams
Waxaa jira macluumaad badan oo onleenka ah iyo warbaahinta bulshada ee ku saabsan tallaalada COVID-19. Waxay noqon kartaa buux dhaaf oo way ku adagtahay in la ogaado waxa lagu tiirsan karo. Hubi inaad ka heleysid macluumaadka illo aamin ah oo aadan wadaagin wax walba illaa aad ka ogaatid inay run tahay.
Meesha laga helo macluumaad la isku halayn karo
Waxaad ka heli kartaa macluumaad la isku halayn karo, saynis-ku saleysan meelaha soo socda:
Wasaarada Caafimaadka ayaa hogaamiso nidaamka caafimaadka iyo naafada New Zealand, oo waxay leedahay guud ahaan masuuliyada maamulka iyo hormarinta nidaamkaas.
Tallaalada COVID-19 — Wasaarada Caafimaadka (external link)
Xarunta La talinta Tallaalka (IMAC)
IMAC waa hay’ad qaran oo sal dhigeedu ahay Dugsiga Caafimaadka Dadweynaha ee Jaamacada Auckland. Waxay bixisaa macluumaad madax banaan, dhab ah ee ku saleysan cilmi baarista sayniska caalamiga ah iyo New Zealand ee ku saabsan tallaalka cudurada laga hortagi karo faa’idooyinka iyo halisaha tallaalka.
Xarunta La talinta Tallaalka (external link)
Hay’ada Caafimaadka Aduunka (WHO)
WHO waa hay’ad Qaramada Midoobay, oo waxay masuul ka tahay caafimaadka dadweynaha caalamiga ah.
Tallaalada COVID-19 — WHO (external link)
Khiyaamooyinka tallaalka COVID-19
Waxaa jira waxyaabaha qaar ee ugu muhiimsan ee aad u baahantahay inaad ka ogaatid tallaalka ee la xiriira khiyaamooyinka:
Marnaba laguma weydiinayo inaad bixisid tallaalka ama bixisid inaad hubisid booskaaga ee safka.
Macluumaadka Warbixinta rasmiga ah ee ku saabsan tallaalka waxay ka imaaneysaa adeeg bixiye lagu kalsoon yahay ee tusmada caafimaadka, sida Wasaarada Caafimaadka, Unite against COVID-19 ama guddiga caafimaadka degmadaada (DHB).
Shaqaalaha caafimaadka marnaba ma imanayo gurigaaga si uu kuu siiyo tallaalka, illaa la diyaariyo waqti ka hor.
Marnaba laguuguma weydiinayo macluumaadka shaqsiga ah dhinaca fariin qoraalka ama i-meelka. Haddii aad aragtid, ku soo wargeli CERT NZ oo haka jawaabin fariinta.
Haddii aad heshid i-meel, wacitaanka taleefonka ama SMS oo ku weydiinayo sharaxaadaha dhaqaalaha ee la xiriira tallaalka waxay ahaaneysaa khiyaamo. Ku soo wargeli CERT NZ islamarkiiba.
Haddii aad aragtid wax ku saabsan tallaalka ee aan u muuqan sax, ku soo wargeli CERT NZ (external link)
Badelkeeda, waxaad ka soo wici kartaa 0800 237 869.
Ka ogow wax badan ee ku saabsan khiyaamooyinka tallaalka COVID-19 (external link)